नझुक्किनुस्, यो फोटो इटालीको होइन « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
नझुक्किनुस्, यो फोटो इटालीको होइन
काठमाण्डाै ९ चैतः अहिले फेसबुकमा एउटा फोटो धेरैले सेयर गरिरहेका छन्। फोटोमा धेरै मान्छेहरु सडकमै ढलिरहेको देखिन्छ। इटालीमा यस्तो अवस्था देखिएको भन्दै मानिसहरुले यो फोटो सेयर गरिरहेका छन्। तर नझुक्किनु होला, यो फोटो इटालीको होइन। न यी मान्छेहरु कोरोना भाइरसकै कारण मरेका हुन्। के हो त यो फोटोको सत्य? आउनुस् हेरौँ।
मेराे संसार टडकमबाट
हुम्ला, ३ पुस : हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीका तीन वटै बस्तीमा पहिलेदेखि